आईपिएलमा बेंग्लोरको उत्कृष्ट पुनरागमन, हैदराबादलाई १४ रनले हराए संगै बढयो प्लेअफको सम्भावना !::सुनौलो न्यूज
आईपिएलमा बेंग्लोरको उत्कृष्ट पुनरागमन, हैदराबादलाई १४ रनले हराए संगै बढयो प्लेअफको सम्भावना !
इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको गए रतिको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले जित हात पारेको छ । शीर्ष स्थानमा रहेको सनराइजर्स हैदराबादलाई १४ रनले पराजित गरेसँगै बेंग्लोरको अन्तिम चारमा पुग्ने सम्भावना बढेको हो ।
एम चिन्नश्वामी रंगशालामा विहीबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली बेंग्लोरले हैदरावादमाथि रोमाञ्चक जित हात पारेको हो । २१९ रनको विशाल चुनौति पछ्याउदै ब्याटिङ गरेको हैदरावादले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा २०४ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।
हैदरावादका लागि कप्तान केन विलियमसनले ४२ बलमा ७ चौका र ५ छक्काको मद्दतमा ८१ रन बनाएपनि जित दिलाउन सकेनन् । त्यस्तै, मनिष कुमार पाण्डेले ३८ बलमा ६२ रन बनाए । यता, ओपनर ब्याट्सम्यान एलेक्स हलेसले ३७ र शिखर धवनले १८ रन बनाएका थिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंग्लोरले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा २१८ रन बनाएको थियो । बैग्लोरका लागि एबी डिविलियर्सले सर्वाधिक ६९ रन बनाए । त्यस्तै, मोइन अलीले ६५ रन बनाएका थिए ।
बलिङतर्फ हैदरावादका राशिद खानले ३ विकेट लिएका थिए ।
आईपीएलको शीर्ष स्थानमा भने पराजित सनराइजर्स हैदरावाद नै रहेको छ । १३ खेल खेलेको हैदराबादले ९ खेलमा जित ४ खेलमा हार ब्यहोर्दै १८ अंक रहेको छ । हैदरावाद प्लेअफमा यसअघि नै पुगिसकेको छ । त्यस्तै १६ अंक बनाएको चेन्नाई सुपर किंग्स पनि प्लेअफमा पुगि सकेको छ । यता तेस्रो स्थानमा रहेको कोलकत्ता नाइट राइडर्सको १३ खेलबाट १४ अंक रहेको छ । चौथो स्थानमा मुम्बई इन्डियन्स, पाचौमा बेंग्लोर, छैटौमा राजस्थान रोयल्स र सातौ स्थानमा रहेको किंग्स इलाभेन पञ्जाबको समान १२–१२ अंक रहेका छन् ।